रोचक / विचित्र – Page 17 – Medianp
अतिथी होस् या दानव, यी ५ प्रकारका व्यक्तिलाई झुक्केर पनि नदिनुहोस् घर भित्र छिर्न
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष ०४, २०७५१२:०१0
काठमाडौँ, ४ पुस । अथितीलाई भगवानको रुपमा लिने गरिन्छ । तर सबै अतिथी भगवान हुँदैनन् । कोही पाहुना भगवानको रुपमा आउँछन् श्वास नलाग्न नसक्छ तर कोही अतिथीको रुपमा आउने गर्छन् ती व्यक्ति घरमा
यी चीज सधै भरि पर्समा बोकेर हिड्नुहोस्, मिल्नेछ सफलता नै सफलता !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष ०४, २०७५११:१२0
काठमाडौँ,४ पुस । जन्म कुण्डलीले सबै जना मानिसको सबै कुरालाई राम्रो बताउँछ भन्ने छैन् । यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा चन्द्र अशुभ रहेको छ भने त्यस्तो बेलमा समस्याहरु आउन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्याबाट टाढा रहनको
हत्केला हेरेर यसरी थाहा पाउनुहोस्, तपाई भाग्यमानी की अभाग ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष ०४, २०७५१०:५३0
काठमाडौँ,४ पुस । भविष्यको जीज्ञासा मेट्ने सबै कुराहरु हातको रेखामा हुने गर्छ । हातको रेखामा जीवन रेख, भाग्य रेखा, हृदय रेखा र मष्तिस्क रेखा हातमै कोरिएको हुन्छ । हातमा देखिने साना तिना रेखाले भविष्यका धेरै
विष्णु पुराणमा उल्लेख भए अनुसार, यी चार स्त्रीसँग झुक्केर पनि नगर्नुहोस् विवाह !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष ०३, २०७५११:३४0
काठमाडौँ, ३ पुस । सफल जीवन बिताउनको लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो लागि असल साथी रोज्ने गर्छन् । मानव जीवनको १६ संस्कार मध्ये विशेष महत्वपूर्ण स्थानमा राखिएको संस्कार विवाह हो । जीवनलाई सफल बनाउन गरिने विवाह
हेर्नुस् अनौठो तस्विरहरु, जसले ढुङ्गाका मुटु भएकालाई पनि पगाल्छ
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष ०३, २०७५११:३३0
काठमाडौ । यो संसारमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु रहेका छन् । जसमध्ये प्रत्येकको आफ्नो जीवन भोगाईको आफ्नो आफ्नो कथा ,ब्यथा , कहानी रहेको छन् । भने कोही मान्छेहरु यहि भिडमा हराई राखेका छन् । भने कोही
एक अचम्मको घटना ,आफ्नो मालिकलाई टोक्न कुुकुर गयो खोज्दै ,सय किलोमिटर टाढा
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष ०३, २०७५१०:४७0
काठमाडौ । अमेरिकामा एक मानिसलाई आफैले पालेको कुकुरले टोकेको छ । सधै घुम्न जादा खेरि कुकुरलाई लिएर जाने गरेको तर यो पटक चाहि कुकुरलाई झुक्काएर नलिइ गएपछि कुुकुरले करिब १ सय किलोमिटरसम्म दुरीमा खोज्दै
हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ मंगलबार जन्मेका व्यक्तिको स्वभाव
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष ०३, २०७५१०:३८0
काठमाडौँ,३ पुस । भनिन्छ, मानिस जन्मेको समय र वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्छ । कुन दिन कुन समय कुन बार भन्ने कुरा मानिसको जीन्दगी भर निकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रले बताएअनुसार आज हामी
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हिप भएकी मोडल, जसको सोख अझै ठुलो बनाउने (भिडियोसहित)
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष ०३, २०७५१०:२८0
काठमाडौ । यो संसारमा बाचेर र हासेर मात्र घुम्दै हिड्नुपर्छ । यहाँ अनेक किसिमका मानिसहरु पाइन्छ । भने सोख,इच्छाहरु पनि त्यस्तै हुन्छन् । हामीलाई सुहाउदैन होला भन्ने लागेपनि उनीहरु त्यस्तै बनाउन चाहन्छन् ।यस्तै आज कुरा
४ बर्षिय छोरीको हत्या गर्ने सोच बनाएकी आमाले छोरीलाई भनेकी थिइन्, ‘तिमी परीहरुलाई भेट् जाँदै छौँ’
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, पुष ०२, २०७५१६:५४0
एजेन्सी,२ पुस । देवदूत र जीससले छोरीको हत्या गर्न भनेको भन्दै इङ्ल्याण्डको साउथ वेल्स शहरकी एक महिलाले आफ्नो ४ वर्षिय छोरीको हत्या गरेकी छन् । छोरी २ दिनपछि जिवितै हुन्छिन् भन्ने आशामा यस्तो गरेको ती
पुजा आज गर्दा यो दिशामा बाल्नुहोस् बत्ती ! बढ्नेछ आयु !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, पुष ०२, २०७५१५:४३0
काठमाडौँ,२ पुस । हिन्दु धर्मअनुसार पुजाआज गर्दा सुरुमा नै बत्ती बाल्ने चलन रहेको छ । हरेक पुजा आज गर्नु पूर्व दियोमा बत्ती बाल्नु शुभ मानिन्छ । यसरी दियो बाल्नाले घरमा शान्ति मिल्नुको साथै दुख कष्ट
Previous 1 … 16 17 18 … 179 Next